यी हुन मुख्यमन्त्री राईकी २६ वर्ष कान्छी बेहुली मिस मंगोल २०१८ जाङमु शेर्पा – NepalajaMedia
यी हुन मुख्यमन्त्री राईकी २६ वर्ष कान्छी बेहुली मिस मंगोल २०१८ जाङमु शेर्पा
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको चर्चा चुलिएको छ । राजनीतिमा सक्रिय उनको राजनीतिक प्रसङ्गमा नभइ व्यक्तिगत जीवनको विषय चर्चामा आएको हो ।
राईको यहि माघ ११ गते विवाह गर्न लागेसँगै चर्चा भएको हो । विवाह हुनु सामान्य नै हो तर आफूभन्दा २६ वर्ष कान्छी युवतीसँग विवाह हुन लागेकाले उहाँको वैवाहिक जीवनको विषयमा आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा भएको हो ।
४९ वर्षीय शेरधन राईले आफूभन्दा २६ वर्षभन्दा कान्छी मिस मंगोल २०१८ जाङमु शेर्पासँग विवाह गर्न लाग्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री राईको पुर्ख्यौली घर भोजपुर हो भने जाङमुको संखुवासभा हो । आमाबुवा अमेरिकामा बस्दै आएकी जाङमु अहिले भने काठमाडौं बस्दै आउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयले विवाह हुन लागेको जानकारी दिए पनि बेहुलीको बारेमा अहिलेसम्म खुलासा गरेका छैनन् । यद्यपि विभिन्न मिडियाले जाङमुको बारेमा पत्ता लगाएका हुन् । उहाँले विषयमा मिडियामा आएपछि भने मुख्यमन्त्री राई मौ’न हुनुहुन्छ । उहाँले यसको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।
राजनीतिक उतारच’ढावका कारण वैवाहिक जीवनको विषयमा सोच्न नभ्याएका बताउँदै आउनुभएका मुख्यमन्त्री राईको व्यक्तिगत जीवन भने बेलाबेलामा बि’वादमा आइरहेको छ । क’म्युनिष्ट नेता बालिका खड्काले राईले आफूमाथि वर्षौंदेखि यौ’नशो’षण गर्दै आएको बताउँदै आएकी छन् । राईले भने बालिकाको आ’रोपको ख’ण्डन गर्दै आउनुभएको छ ।
Prevसंसारलाई नै छक्क पार्ने यी अचम्मका जोडीहरुको कहानी सुन्दा तपाई पनि छक्क पर्नु हुनेछ
Nextइजरायल रोजगारमा जान के-के चाहिन्छ योग्यता ? कहाँ दिने आवेदन ? (भिडियो सहित)
आइतबार यी राशि हुने हरुको हुदैछ भाग्योदय, चैत्र २९ गते आइतबार को राशिफल हेर्नुहोस्